Ny fivoaran'ny kolontsaina mampiaraka amin'ny Internet any Afrika
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny fivoaran'ny kolontsaina mampiaraka amin'ny Internet any Afrika
Ao amin'ny fiarahamonina nentim-paharazana afrikanina (ATS) dia tsy nisy na inona na inona akaiky ny mpivady manao daty ampahibemaso na mitokana. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia mivory ao amin'ny orinasa ray aman-dreniny izay hisafidianan'ny vehivavy ny vady sahaza indrindra ho an'ny fanambadiana arakaraka ny toerana ara-tsosialy sy ara-bola.
Rehefa fantatry ny vehivavy ny vadiny, dia tsy afaka mivory izy ireo mandritra ny fiaraha-mikorana toy ny fampakaram-bady, lanonana fanombohana, sy fandevenana, kilalao ary fanatanjahantena ankoatry ny hafa, na amin'ny tokantrano. Ny mampiaraka dia mitokana kokoa ary tsy misy firaiketam-po mandra-panambadiana, tsy nisy izany ny hoe hivoaka ampahibemaso.
Saingy, io kolontsaina io dia nanomboka niova tato anatin'ny taona vitsivitsy izay ahafahan'ny mpivady maneho fitiavana ampahibemaso na dia any amin'ny firenena sasany toa an'i Tanzania aza mifampiraharaha ampahibemaso dia mbola tsy sakanana. Amin'izao fotoana izao, ny fifandraisana dia nanjary tsy dia mahazatra loatra intsony satria tsy misy dingana firesahana intsony, izay ahafahan'ny olona mihaona amin'ny maraina ary mahazo fifandraisana akaiky amin'ny tolakandro.
Ny elefanta ao amin'ny efitrano izao dia ny fampiarahana daty ara-teknolojia izay hihaonan'ny olona amin'ny tranonkala mampiaraka izay mitarika amin'ny fifandraisana tsy misy dikany sy matotra, fanambadiana, ary koa ny fiandohan'ny fanambadiana niteraka.
Miaraka amin'ny firongatry ny fampahalalam-baovao sy ny haitao, dia nahita maso ny olona avy amin'ny fari-piainana rehetra izahay, anisan'izany ireo olo-malaza tafiditra ao amin'ny Internet, fomba iray nindraminy avy any andrefana.
Ny sehatra an-tserasera toa ny Instagram, Facebook, ary WhatsApp dia nanjary làlana ahafahan'ny mpivady tanora mifampiresaka noho ny halaviran-toerana, ny fahafaha-manao ary ny filaminana mifanohitra amin'ny ATS izay nonenan'ny olona tamina vondrom-piarahamonina kely ary nanambady tao amin'izy ireo.
Nikendry ny banky sy ny fahasalamana ny taranaka voalohany amin'ny fampiharana finday any Afrika, saingy mikendry fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialy izao ny fampiharana, ao anatin'izany ny fiaraha-miasa izay itsidihan'ny olona tranonkala mampiaraka ankehitriny hifandraisany amin'ny olon-tsy manam-pitiavana hafa. Ireo tranonkala mampiaraka dia tratran'ny fampiharana finday miaraka amin'ireo tranonkala mampiaraka malaza indrindra atsy Afrika izay resahina etsy ambany:
Ity rindranasa mampiaraka ity dia malaza any Afrika Atsimo sy any amin'ny firenena Afrikana Tatsinanana indrindra any Kenya Tinder dia ahafahan'ny mpampiasa mizara ny tena sariny rehefa miresaka amin'ny lalaon'izy ireo. Ireo mpampiasa mavitrika dia mahatratra hatrany amin'ny 100 ny lalao ao anatin'ny herinandro amin'ny fampiharana any Los-Angeles.
Grindr dia ho an'ny lehilahy izay tia mampiaraka manokana. Ny fampiharana dia manome ny lehilahy pelaka fomba hafa hihaonana sy hananganana fifandraisana satria ny ankamaroan'ny fiarahamonina afrikana dia mpandala ny nentin-drazana momba ny firaisana ara-nofo sy ny fanambadiana. Nilaza ireo mpamorona ny fampiharana fa izy no fampiharana mampiaraka pelaka indrindra eto Afrika ary Kenya no mpampiasa azy indrindra.
Ity rindrambaiko ity dia manana ny mampiavaka ireo daty horonantsary dimy minitra mahatonga ny olona maro ho liana amin'izany miaraka amin'ireo mpampiasa 13 tapitrisa manerantany. Afaka manana daty virtoaly miaraka amin'ny lalaovinao mandritra ny dimy minitra amin'ny fampiharana ianao. Amin'ireo firenena afrikana mampiasa ny fampiharana, Kenya dia mitarika miaraka amin'ireo mpampiasa mavitrika kokoa. Solony hafainganam-pandeha SpeedDate dia Omegle izay ahafahan'ny mpampiasa misafidy resaka mifototra amin'ny lahatsoratra fa tsy antso an-tsary. CooMeet dia serivisy mampiaraka malaza iray hafa ao amin'ny indostria.
Ny fampiharana mampiaraka dia malaza amin'ireo mpampiasa Internet izay mampiasa tranonkala mampiaraka mba hiala voly ary tsy liana amin'ny fifandraisana feno fanoloran-tena na fihaonana amin'ireo mpiara-miasa mandritra ny androm-piainana. Ny mpampiasa dia afaka mifidy ny mpikambana tsara indrindra handray anjara amin'ny fifaninanana mahafinaritra amin'ny fampiharana na dia mamorona kaonty pseudo maro aza ny ankamaroan'ny mpampiasa mba hahafinaritra azy io.
Lovoo dia fanitarana ny tranonkala mampiaraka alemana izay ahafahan'ny mpampiasa mifandray amin'ny mpampiasa hafa amin'ny toerana misy azy ireo. Anisan'ny tambajotra sosialy ambony indrindra eto Afrika ny fampiharana
Ny motera dia manana motera mifanandrify amin'ny olona mifanaraka amin'ny fitondran-tena ary mampifandray azy ireo amin'ny lalao sahaza azy ireo ary manana mpampiasa maherin'ny 25 tapitrisa manerantany. Anisan'ireo rindranasa avo lenta indrindra any Kenya, laharana fahatelo izy io
Anisan'ireo rindranasa tambajotra sosialy malaza indrindra, laharana farany ambony ny OkCupid satria mahazo mpitsidika vaovao maherin'ny telo tapitrisa isam-bolana. Miaraka amin'ireo Afrikana Tatsimo ho mpampiasa mavitrika indrindra amin'ny fangatahana mampiaraka ao amin'ny kaontinanta, noho izany, manararaotra betsaka ny OkCupid, dia niparitaka eraky ny firenena Atsinanana sy Andrefana Andrefana ihany koa ilay fampiharana.
Araka ny hitanao, ny fikasan'ny taranaka afrikanina ankehitriny dia nivoatra rehefa mandeha any amin'ireny tranonkala mampiaraka ireny ny sasany mba hitady orinasa, handany fotoana, hihaona amin'ny olona mitovy toetra aminy, fifandraisana matotra, ary ho an'ny fifandraisana akaiky fotsiny rehefa ny fanambadiana no tena tanjona. tamin'ny fiarahana tamin'ny taona 90.